iPhone7ကိုဝယ်ဖို့အကြောင်းပြချက် ၇ ခု | Gadget သတင်း
Villamandos | | Apple, မိုဘိုင်း
El iPhone ကို7၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ မှစ၍ စပိန်နိုင်ငံများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံများစွာရှိ Apple Stores တွင် ၀ ယ်ယူပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အောင်မြင်မှုမှာရက်သတ္တပတ်များစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iPhone အသစ်၏မတူညီသောဗားရှင်းများကိုဝယ်ယူရန်အတွက် Cupertino စတိုးဆိုင်များနှင့်စောင့်ဆိုင်းစာရင်းများတွင်ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်အတူကြီးမားသောဖြစ်ခြင်း။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလျှင်သင့်ကိုငါတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် သင်လစာကို iPhone7တွင်မသုံးသင့်သည့်အကြောင်းပြချက် ၇ ချက်, ဒီနေ့ကမ်းလှမ်းသည်အခြားဘက်မှာသွားရတော့မည် iPhone7ကိုဝယ်စရာအကြောင်း ၇ ချက်ရှိသည်.
အကယ်၍ သင်ဟာ Apple ထုတ်ကုန်များရဲ့ပရိတ်သတ်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြမယ့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ရင်ဥပမာ - iPhone 6s အတွက် iPhone 7S ကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှမလိုအပ်ပါ။ အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော iPhone XNUMX အသစ်တစ်ခု၊ အကယ်၍ သူတို့ကအများကြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
2 iPhone7ကိုသဲသောင်ပြင်နဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုပြproblemsနာမရှိဘဲယူနိုင်ပါတယ်
4 6GB RAM မလိုအပ်ဘဲ Beastly ပါဝါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
6 start ခလုပ်သည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်
iPhone 6s ကိုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမယှဉ်နိုင်တဲ့အရာပဲ အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သောအင်တင်နာလိုင်းများတွင်ရှိခဲ့သည့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သောချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုမှတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည် ကြောင်းနောက်ဘက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်ကဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျောသန့်ရှင်းသည်နှင့်အများကြီးလှပသောကြည့်ရှုသည်။
Apple ကအရောင်သစ်တွေကိုကမ်းလှမ်းပေးပြီးအာရုံခံမှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးနားကြပ်ပေါက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးအောက်ခြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားလိုက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသော port ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးကြိုးမဲ့နားကြပ်များအတွက်လည်းအလွန်အရေးပါသည်။
iPhone7ကိုသဲသောင်ပြင်နဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုပြproblemsနာမရှိဘဲယူနိုင်ပါတယ်
iPhone7ရဲ့အသစ်အဆန်းတွေထဲမှာတစ်ခုပါ Tim Cook မှယောက်ျားများမှရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းကိုကမ်းခြေသို့ရေကူးကန်ထဲကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့သုံးစွဲသူအများစုကအရမ်းကိုလက်ခံကြပြီး၊ စိုစွတ်လာမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဤအချက်နှင့်အတူ Cupertino မှသူများသည်မိမိတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုစိုစွတ်အောင် (သို့) နစ်မြုပ်စေရန်လိုအပ်သောအချိန်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်သောအောင်လက်မှတ်များရရှိထားသည့် Samsung, Sony သို့မဟုတ် Huawei ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများ၏ဆိပ်ကမ်းအမြင့်တွင်သူတို့၏အထင်ကရနေရာကိုနေရာချကြသည်။
ကျွန်တော်တို့အများစုက iPhone 6s ကင်မရာကမတိုးတက်ဘူးလို့ထင်ကြပေမယ့် Apple ကလှည့်ကွက်တစ်ခုပေးပြီး iPhone7Plus မှာ အကျယ်ထောင့်နှင့်မှန်ဘီလူးပါ ၀ င်သည့် 12 megapixel ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်x5 ဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးနှင့် x2 optical zoom အထိရှိသည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် iPhone7နှင့် iPhone7Plus ကင်မရာနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်;
ခြောက် element ကိုမှန်ဘီလူး
True Tone ကို LED လေးခုပါ ၀ င်သည်
မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများ (၆၃ Mpx အထိ)
Hybrid အနီအောက်ရောင်ခြည် filter ကို
Focus Pixels နှင့်အတူ Autofocus
Focus Pixel များနှင့်အတူအာရုံကိုထိပါ
ဓါတ်ပုံများနှင့် Live Photos များအတွက်ကျယ်သောအရောင်အကျယ်
ဓါတ်ပုံများအတွက် Auto HDR
6GB RAM မလိုအပ်ဘဲ Beastly ပါဝါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
ဒီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းစျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အများစုသည် ၆ GB GB RAM နှင့် Snapdragon6ပရိုဆက်ဆာနှင့်တကယ့်ကိုသားရဲများဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် 820 GB RAM ပါသောပထမဆုံး smarptohne ကို Apple အတွက်မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့ iPhone 8 Plus အသစ်မှာငါတို့ကရှာတွေ့ပြီ3GB RAM မှတ်ဥာဏ်သည် iPhone 10s များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးနိုင်ရန် A6 အသစ်နှင့်အတူတကွလုံလောက်သည် ငါစျေးကွက်ရှိမည်သည့် terminal ကိုဆိုရန်ဝံ့ကြလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများကကျွန်တော်တို့ကိုစျေးကွက်ထဲတွင်အင်အားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုထင်မြင်စေပြီး၎င်းသည် "တစ်ခုတည်းသော" RAM memory3GB ရှိပြီး6နှင့်မနီးမဝေးရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုကျန်အရာများထက်တင်ထားသည်။ GBP RAM ကိုဥပမာအနေနဲ့ OnePlus3မှာငါတို့တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
iPhone 6s (သို့) iPhone 6s Plus တို့၏ဘက်ထရီသည်တိုတောင်းလွန်းလှသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိုတစ်နေ့တာကုန်အထိမည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိဘဲအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် iPhone 6s Plus အား ၂ ရက်တကြိမ်တခါဆက်လက်အားသွင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကုန်လွန်သွားသည်ကိုသတိပြုမိပြီး၎င်းကိုအချိန်နည်းနည်းအားသွင်းရန်လိုသည်။ သို့သော် Cupertino မှသူများသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုရယူလိုကြသည် iPhone7သစ်၏ဘက်ထရီကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်း.
ဘက်ထရီတွင်ရရှိနိုင်သော mAh ၏တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိရသေးပါ။ လူတိုင်းနီးပါးအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုပါ။ သို့သော်အသစ်သောပရိုဆက်ဆာနှင့် iOS 10 ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသောစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်၎င်း၊ iPhone 7s နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နားကြပ်များအတွက် minijack ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားသောနေရာသည်အက်ပဲလ်အားအခြားအရာများအပြင် Home ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းစေသည် haptic system အသစ်နဲ့အဲဒါကိုကြိုးစားနိုင်ခဲ့သူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ haptic သည်သင်၏ဝေါဟာရ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး (အေးအေးဆေးဆေးပါ၊ ) အေးဆေးစွာနေပါက Home ခလုတ်သည်ခလုတ်မဟုတ်တော့ဘဲယခုအခါ၎င်းသည်နှိပ်ခြင်း၏အာရုံကိုတုပသည့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောအားသာချက်များမှာ Apple ၏အဆိုအရ၊ ခလုတ်တစ်ခုမဟုတ်တော့သောဤခလုတ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၊ လူတိုင်းနီးပါးအတွက်အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာဥပမာအားဖြင့် iPhone 5s နှင့် iPhone 6s တို့တွင်ကဲ့သို့ Home ခလုတ်သည်ပျက်စီးခြင်းမရှိတော့ဘဲဤခလုတ်မှပြtheနာများသည် iPhone ၌အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိပ်မကြာပါဘူး iPhone ရဲ့စျေးနှုန်းဟာလူတိုင်းနီးပါးအတွက်စျေးကြီးလွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းလူတိုင်းနီးပါးပြaနာမဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘဲသက်သောင့်သက်သာနဲ့အရစ်ကျပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမဆိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသောစတိုးဆိုင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့အပြင်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများအနေဖြင့်လည်း၎င်းကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ် ၀ င်စားသောနည်းလမ်း ၂၄ ခုဖြင့်ပေးချေနိုင်သည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။
၎င်းသည်အားနည်းချက်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း iPhone7၏စျေးနှုန်းမှာစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာများကအရစ်ကျငွေပေးချေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကအရေးမကြီးပါ။
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သော iPhone7ကိုရရှိရန်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များရှိပါသလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » iPhone7ကိုဝယ်စရာအကြောင်း ၇ ချက်ရှိသည်
Juan Fco Peláez ဟုသူကပြောသည်
Mmmm လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ၇ င်းကို ၀ ယ်ရန်မလိုပါ။ အခုလုပ်ဖို့7။
0-0 ထို့နောက် hehehe
Juan Fco Peláezအားပြန်ပြောပါ
ငါက, ဝယ်ယူ G5 ကိုအသုံးပြု။ နှင့် 6s hehehe များအတွက်ရောင်းသူရှာနေ၏ဘက်မှာပြီးသားပါပဲ
Blackberry DTEK60 ဟုလူသိများသည့် Blackberry Argon ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်